Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry Q10 — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry Q10 ‎ → ‎
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry Q10
I yasakazwa Ukuvikelwa kungenzeka BlackBerry yakho kuzo zonke izinhlobo yokulimala. esiyisixwayiso inkomba iyabonakala ngokokuqala ngqa Kulezo zimo ivaliwe! design Laconic ibhizinisi isitayela, ukuthungwa emnandi.
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry Q10 kakhulu thembeke ukuvikela BlackBerry yakho kuzo zonke umonakalo: uhlevane, imihuzuko, ukungcola, uthuli umswakama. esiyisixwayiso inkomba iyabonakala ngokokuqala ngqa ngo evaliwe ikhava — lokhu kusho ukuthi ngeke uhlale exhunyiwe njalo ngaphandle ulahlekile imilayezo ebalulekile!
Case iyasiza uhlobo emisha: Manje ungabona isimo LED-display yakho ngaphandle kokuvula ikhava! Lokhu kwaba kungenzeka ngenxa imbobo ubukhulu inkomba on the phambi kwesembozo. Wena njalo ukuthi uma ubungathola umyalezo (ukubaniza LED obomvu), noma sekuyisikhathi Ukushaja ibhethri (agqoke yellow).
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry Q10 has a design sleek, ukuthungwa emnandi futhi imigqa abushelelezi. Leli cala uphelele for isitayela ibhizinisi.
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry Q10, Black (Black) ACC-50707-301 ●
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry Q10, White (mbala omhlophe) ACC-50707-302 ●
Black (Black) ACC-50707-301
White (mbala omhlophe) ACC-50707-302